Our Mentors - BIM Trainings
CCIE & Design Mentoring Program (CDMP)
Data Center Associate Plus (DCA+)
Network Security Associate Plus (NSA+)
Network Professional Plus (NP+)
Network Associate Plus (NA+)
Custom Industrial IT Trainings
Networking with Myanmar Networkers 2014
Networking with Myanmar Networkers 2015
Networking with Myanmar Networkers 2016
Call us now +95 9253455478
Zay Yar Phyoe
CCIEx2 #24573 (R&S, Service Provider)
Networking နယ်ပယ်တွင် 2007 မှစ၍ Singapore ရှိ MNC များ တွင် Network Engineer/ Network Team Lead အနေဖြင့် အဆင့်ဆင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ Cisco Gold…
Htun Win Naing
CCIE #52207 (R&S)
ကိုထွန်းဝင်းနိုင် ဟာ 2010 မှာ Engineer အဖြစ် Singapore နိုင်ငံတွင် စတင် အလုပ် လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ 2011 မှာ CCNA ရရှိပြီး 2016 မှာ CCIE(R&S) ကို…
CISSP-ISSAP, CISM, CISA, COBIT, ITIL, ISO27002, RHCI, MCT
ကိုဘုန်းမြင့်သည် IT နယ်ပယ်သို့ 1998 နှစ်မှ စတင်ကာ Assembly Programmer တစ်ယောက်အနေဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ငယ်စဉ်အခါက Washington D.C. မြို့ U.S.A. တွင်နေထိုင်ခဲ့ကာ ကွန်ပျုတာပညာရပ်များကို စတင်ဆည်းပူးလေ့လာခဲ့ပါသည်။ 2000 ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကာ…
Ye Thura Thet
CEI, CISSP, CISA, CRISC, GPEN, GMON, GMOB
ကိုရဲသူရသက်သည် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးနှင့်ပက်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ကျော် ရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရဲသည် သူ၏ carrier ကို programmar တစ်ဦးအနေဖြင့် 90s ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာစတင်ခဲ့သူပါ။သူသည် Bachelor of Information Technology ဘွဲ့ကို…
Myint Htay Aung
ကိုမြင့်ဌေးအောင် သည် VCP6-DCV, VCP6-NV Certified တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Enterprise SI Project များစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ရုံသာမက ISP Company တစ်ခုတွင် Systems Engineer အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Virtualization နှင့် Cloud…
Ye Lin Aung
ကိုရဲလင်းအောင် သည် RHCSA, RHCE Certified တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Enterprise Level SI တစ်ခုတွင် Systems Engineer တစ်ဦးအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် Red Hat Certified Training Center…
ကိုထက်အောင် သည် IT career ကို 2014 ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင် ရောက် ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Foreign Bank ကြီးတစ်ခုတွင် System & Network Support တစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ…
The whole new learning experience. Register Today!
Virtualization မှတ်စုတို အပိုင်းအစများ အပိုင်း(၂)
Virtualization မှတ်စုတို အပိုင်းအစများ အပိုင်း(၁)
When CCIE is Not Enough (CCIE နှင့်မလုံလောက်တော့သောအခါ)
Recommended Skill Sets ofaProfessional System Engineer
Do Network Engineers Need Academic Diploma/Degree?
Multicast မိတ်ဆက် – Part 1
Network Infrastructure Security Tools
113, 54th Street,
+959253455478
© 2018 · BIM Trainings.